Tuesday November 17, 2020 - 09:16:04 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wargeyska New York Times ayaa faafiyay warbixin sheegaysa in Mareykanku uu dhammaan ciidamadiisa kala baxayo dalka Soomaaliya ee dhaca bariga qaaradda Afrika islamarkaana uu si aad ah udhimayo ciidamada uga sugan dalka Afghanistan.
Amarka kasoo baxay Trump oo laga qeybiyay xarunta Pentagon-ka maalintii Isniintii ayaa dhigasa in tirada ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan kala bar ladhimi doono marka la barbardhigo tirada hadda ku sugan oo gaaraya 4500 oo askari waxaana wadankaas baaqi kusii ahaan doona 2250 askari.
Ciraaq gudaheeda Pentagon-ka ayaa hoos u dhigi doona ciidamadiisa waxaana lagusoo koobi doonaa illaa 3,000 oo askari sida ay taliyayaashu horay u shaaciyeen.
Saaxada uu isbedelka ugu weyn ka sameyn doono maamulka Trump ayaa ah Soomaaliya oo dhammaan uu kala bixi doono ciidamadiisa ku sugan kuwaas oo lagu sheegay inkabadan 700 oo askari, ciidamada qaarkooda ayaa tababar siiya maleeshiyaadka dowladda Federaalka islamarkaana qaada duqeymo xagga cirka ah oo ay labeegsadaan wilaayaadka islaamiga ee shareecada islaamka lagu maamulo.
Marka laga hadlayo qorshaha ka bixitaanka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa la sheegay in uusan khuseynin ciidamada American-ka ee ku sugan dalalka deriska la ah soomaaliya ee Kenya iyo Jabuuti halkaas oo ay ka haadaan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ee Mareykanka ee duqeynta ka wada Soomaaliya.
Xukuumadda Washington waxay sheegaysaa in saldhigyadaas ku yaal bariga Afrika lagala socan doono dhaq dhaqaaqyada ay sameynayaan jihaadiyiinta Al Shabaab, Sida ay sheegeen saraakiil si dhow ula socdo qorshaha Trump ee Soomaaliya islamarkaana ka qeyb galay wadahadalladii looga arrinsanayay bixitaanka ciidanka Mareykanka ee mandiqadda basle diiday in lashaaciyo magacyadooda.
Go'aankan degdegga ah ee Trump uu qaatay waxaa digniin kasoo saaray qaar kamid ah Senetarrada Xisbiga Xisbiga Jamhuuriga oo u arka mid halis ku ah amniga qaranka Mareykanka.
Senator Mitch McConnell ayaa tallaabadan uu Trump qaatay lameel dhigay muddii uu Obama ka qaatay ka bixitaankii Ciraaq sanadii 2011.
Sanaddii 2017 ayuu Donald Trump amar kusiiyay taliska AFRICOM in ay geysan karaan duqeymo aan kala sooc laheyn si loo wiiqo awoodda Al Shabaab arrinkaas oo dhaliyay dhimashada boqolaal qof shacab ah taas bedelkeena waxaa sii xoogeysatay awoodda Shabaabul Mujaahidiin.
Warbixinta New York Times waxaa lagusoo gunaanaday in go'aanada Trump ay dhaqan gal noqon doonaan 15 Janaayo 2021-ka shan maalin ka hor inta uusan xilka madaxtinimo ku wareejin Joe Biden.